Iindaba -IThekhnoloji yokuNciphisa ubuNtsundu-Udliwanondlebe: "Ukudityaniswa kwamaphepha kudala ukuKhanya okuphezulu"
Umgangatho weMveliso yeVinyl yoMgangatho
Umgangatho wemveliso ye-Marble Sheet yeMveliso ye-PVC
Umlinganiso weMveliso yeMboniso yeMarble ye-PVC
Umgangatho wokuvelisa iPaneli yePVC
Umgangatho weBhodi yePvd / WPC yeBhodi yeMveliso
Umgca weProwuction yePVC
Umgca wePVC wePrusion
Umatshini omnye we-Screw extruder
I-Twin Screw Screw Extruder Umatshini
Ingqungquthela yeTwin Screw Extruder Machine
Itekhnoloji yokuNcitshiswa koBungakanani-Udliwanondlebe: "Ukudityaniswa kwamaphepha kudala ukuBonakala okuPhezulu"
Umlawuli oPhetheyo weGetecha uBurkhard Vogel malunga noMzi-mveliso we-4.0 kwiTekhnoloji yeGranulating Kumacandelo amaninzi oshishino lweplastikhi, ukudityaniswa okunxulumene nemveliso yetekhnoloji yegranulation ekubumbeni ngenaliti, i-extrusion, ukubumba ukubetha kunye nemigca ye-thermoforming iqhubela phambili ngokukhawuleza. Umvelisi wegranulator uGetecha uphendule kule meko kwangoko kwaye ngoku uxhobisa i-hopper kunye ne-infeed granulators yoluhlu lwe- "RotoSchneider" ngemisebenzi emininzi ekrelekrele ngokweendlela ze-Industry 4.0. Umlawuli olawulayo uBurkhard Vogel ucacisa kudliwanondlebe nokubalulekileyo.
Mnu Vogel, kubaluleke kangakanani ukuxhotyiswa kweeGraneculators ngemisebenzi yecandelo le-4.0 okwangoku kwiinjineli zakho zophuhliso? I-Burkhard Vogel: Ukongeza kwinkqubo eqhubayo yokwenziwa kwezinto ezintsha zokwenza umsebenzi weerotors, igumbi lokusika kunye neenkqubo ze-infeed kunye nezokukhutshwa, ukuphuculwa kwemisebenzi ye-Industry 4.0 yegranulators yethu kubaluleke kakhulu, ngakumbi kule minyaka mithathu idlulileyo. Oku kusebenza kuthotho kunye nokuncinci kunye nokuxinana ecaleni kochungechunge lwe-granulator kunye nakwii-granulators ezinkulu kunye ne-infeed granulators. Ucinga ukuba ithini into ethatha isigqibo apha? IVogel: Nokuba ucinga ngeshishini leemoto kunye nabanikezeli balo, ukwenziwa kwezinto zokupakisha okanye icandelo elikhulu leemveliso zabathengi - kuwo onke amashishini umnqweno wokuqhubeka nokuzenzekelayo unyanzelisa inkqubo yedijithali yokwenza imveliso. Ukufezekiswa kwezakhiwo ngokwemigangatho yecandelo le-4.0 akuyeki kumhlaba wobume bezinto kunye netekhnoloji yegranulation. Iinjineli zethu zikuthathele ingqalelo oku kwiminyaka eliqela eyadlulayo, ukuze sibe nakho ukwakha ubuchule obuninzi kule ndawo kwaye ngoku siyakwazi ukuxhobisa iigranulators zethu zeRotoSchneider ngoluhlu lweenkcukacha ezikrelekrele kunye neempawu zonxibelelwano.
Ngaba yonke le misebenzi yecandelo le-4.0 isebenza ngeli xesha izixhobo zezixhobo zegranulators? IVogel: Hayi kuzo zonke iimeko. Ukusebenza kwecandelo le-4.0 kungena kugxilwe kumthengi xa efuna ukudibanisa itekhnoloji yegranula kwiinkqubo zakhe ezizenzekelayo zokwenza iiplastikhi. Xa oku kusenzeka, ulwazi kunye nonxibelelwano lwetekhnoloji yokudityaniswa kwegranulators kwizixhobo zetekhnoloji yemveliso zidlala indima ephambili, ukuze ukusebenza nokufumaneka kwazo kukhuselwe kwinqanaba ledijithali. Ngaba unokucacisa ngakumbi malunga nalo mba? I-Vogel: Khawufane ucinge iprosesa yeplastikhi ngenjongo yokufaka enye okanye nokuba uninzi lwembombo yethu esecaleni okanye ecaleni kwe-cofa igranulators ekuhambeni kwayo kunye neenkqubo zemveliso ezenzekelayo zisebenzisa amabhanti okuhambisa, izixhobo zokuthambisa, izitishi zokugcwalisa kunye nezinye iinkqubo zepheripherali, ngaphakathi ukuyalela ukubuyisela intsalela kunye nenkunkuma kwimveliso kusetyenziswa isekethe yokurisayikilisha ngendlela egcina izixhobo. . Inxalenye yeprojekthi enjalo, izinto ezahlukeneyo zecandelo le-4.0 kwii-granulators zethu zinokubonelela ngeenkonzo ezibalulekileyo. Kungenxa yokuba ayixhasi kuphela inkqubo eqhubekekayo, kodwa ikwaqinisekisa ukuqiniswa komgangatho, ivumela inkqubo-ehamba noqwalaselo kwaye inokuphucula ngokubonakalayo ukufumaneka komzi mveliso. Yeyiphi imisebenzi ye-4.0 ekufuneka yenziwe i-granulator kuyo nayiphi na imeko? I-Vogel: Oku kugqitywe ngokusekwe kwiimfuno zekhonkrithi zeprojekthi kunye neenjongo zomthengi. Izinto ezininzi ngoku zinokwenzeka kuba sisebenzisa amathuba amaninzi woluvo lwangoku kunye netekhnoloji yojongano kunye noluhlu lweenkqubo zebhasi zentsimi. Ngale ndlela uninzi lwenkqubo ebalulekileyo kunye nedatha yomatshini inokucofwa, kubhalwe uxwebhu, kulungiswe, kuboniswe kwaye kuvavanywe. Ngaba unawo umzekelo obonisa oku? I-Vogel: Ukuba utshintshiselwano lomqondiso phakathi kwe-granulator kunye nomgca wemveliso luqwalaselwe, zonke izikhundla, iintshukumo kunye nemicimbi yeempazamo zinokurekhodwa kwaye zabelwe. Ngokusekwe koku, iimeko ezinzima zinokuxelwa kumanqanaba okulumkisa achaziweyo kumgangatho ophezulu wenkqubo yokulawulwa kwemveliso, ethi ke iqale amanyathelo afanelekileyo okulungisa kunye nokulungisa kwinqanaba lokuqala. Ukongeza, kunokwenzeka ukuba urekhode yonke imilinganiselo yokusebenza ehambelana nemveliso kunye namanani aphambili ezinto zegranulator- njengokuphuma okanye umgangatho wezinto ezisemhlabeni- kunye nokuzithumela kwiDatha yokuSebenza ngokuthimba okanye kwiCandelo lokuChonga eliPhambili -Iimpawu zeprosesa yeplastikhi yovavanyo olongezelelweyo. Oku kuyasebenza nakumaxesha okubaleka, ukusetyenziswa kwamandla, iincopho zokusebenza kunye nezinye iiparameter ekusebenzeni kweegranulators. Sinokulungiselela ukuba yonke imiyalezo yenkqubo idluliselwe kwikhompyuter eyisingathiweyo kwaye igcinwe apho ukuze ihlolwe kwaye ibhalwe kumaxwebhu. . ll oku kudala ukungaqiniseki okuphezulu malunga nokusebenza kwenkqubo ezenzekelayo. Ke umqhubi wezityalo ufumana ulwazi malunga nokuphunyezwa kwenkqubo ebalulekileyo kunye nokuphuculwa komgangatho? IVogel: ichanekile. Hayi, ubuncinci ngenxa yokuba izinto zedatha ezigqityiweyo ngokutshintshiselana ngomqondiso phakathi komgca wemveliso kunye nesityalo segranulating ikwafumaneka kwimisebenzi ye-Industry 4.0, eyenza ukuba kuthiwe ukubekwa kweliso kwangaphambili nokwandisa ukufumaneka kwesityalo. Umzekelo, ulwazi oluninzi oluqokelelweyo lunokulungiselelwa ulondolozo lwangaphambili kwaye emva koko lubuyiswe sisixhobo sokugcina kude seGetecha. Ukulungiselela le njongo, ii-granulators zinokudityaniswa kwaye zidityaniswe kwisiseko se-MRO sabathengi. Ulwazi olufunyenwe koku lukwaqukuqela luye kwikhathalogu yokusombulula ingxaki ye "manual" emanyanisiweyo yeegranulators zeGetecha. Inkqubo yolawulo lwenkqonkqo kumatshini wokuvelisa inokubonisa olu lwazi kumqhubi. Yeyiphi iprojekthi ye-4.0 yecandelo i-Getecha esebenza kuyo ngoku? IVogel: Ewe, ezi ziiprojekthi eziqhubekayo kunye nabathengi, kwaye andinakho ukuveza okuninzi malunga nazo. Kodwa ndiyakuxelela ukuba ingaba kungokumosha na inkunkuma evela ekukhutshweni kwamaphepha e-poly-propylene amnyama, iindawo ezingalunganga ezivela kwi-thermoforming ye-cof- fee capsules okanye i-edge trims ezivela kwimveliso yefilimu-kwiindawo ezininzi ze-Getecha granulators kunye ne-Industry 4.0 imisebenzi ngoku Inxalenye esekiweyo yemigca yemveliso. I-Digitalisation- ukongeza ekukhetheni iirotors ezifanelekileyo, iidrive, iihopper kunye nezinye izinto ezininzi - ngoku yeyona nto iphambili kuyilo olujolise kubathengi lweegranulators zethu. . Siqinisekile ukuba esi sihloko siza kuqhubeka nokubaluleka ngokubaluleka kwixesha elizayo
UKUGCINWA KOMATSHINI ngumthengisi oqeqeshiweyo kumgca wemveliso kwicandelo leplastiki extrusion.
Sinceda umzi mveliso wabathengi ukuba baphucule imveliso yabo yePruder kunye nemveliso.
Ixesha Post: 2021-03-04
Ukugcina uMzi mveliso Co., Ltd. Icandelo loMatshini bePlastiki
I-9F, iBhlokhi-C, iRongZhi BD, uNombolo 4 iNdlela yeLongShan, isithili seXinWu iWuxi 214028, China.
Inkqubo ye- Umatshini